China Flake graphite powder Mugadziri uye mutengesi | Jinglong
Flake graphite upfu
Natural flake graphite poda yakasarudzika crystalline graphite, iri muchimiro chehove phosphorus. Iyo ndeyekamatanhatu sekristaro system ine marara mamiriro. Iyo ine yakanaka zvivakwa zvepamusoro tembiricha kuramba, magetsi conduction, kupisa conduction, lubrication, plastiki, acid uye alkali kuramba.
Flake graphite inowanzoshandiswa muzvigadzirwa zvepamusoro uye zvipfeko mu metallurgical indasitiri. Senge magnesia kabhoni zvidhinha, zvinorovererwa, nezvimwe. Izvo zvinodzikamisa kutanga zvinhu zvinoputika mumaindasitiri emauto, kushayisa simba uye kumhanyisa mumiririri wekunatsa indasitiri, penzura lead yeanogadzira indasitiri, kabhoni brashi yemagetsi indasitiri, electrode yebhatiri indasitiri, chinokonzeresa chemakemikari manyowa. indasitiri, nezvimwewo. Flake graphite inogona kuenderera mberi kugadzirwa kuti ibudise graphite emulsion, iyo inogona kushandiswa seyokuzora, kusunungura mumiririri, kudhirowa mumiririri, kuitisa kupfeka, nezvimwewo. Inogona zvakare kushandiswa seyakagadzirwa zvigadzirwa zveyakagadziriswa graphite zvigadzirwa, senge inoshanduka graphite. zvisimbiso uye zvinogadziriswa graphite zvinoumbwa zvigadzirwa.
Mhando dze flake graphite dzakarongedzwa zvinoenderana nekabhoni yezvinyorwa: semuenzaniso, yakachena-yakachena graphite ine kabhoni zvemukati zve99.99-99.9%, yakakwira-kabhoni graphite ine kabhoni zvemukati zve99-94%, yepakati kabhoni graphite ine kabhoni zvemukati zve93. -80%, uye yakaderera-kabhoni graphite ine kabhoni zvemukati zve75-50%.
Izvo zvivakwa zve flake graphite: iyo flake crystal yakakwana. Iyi firimu yakatetepa uye ine kuomarara kwakanaka. Zvakanakisa mumuviri nemakemikari zvivakwa, zvine yakanaka tembiricha kuramba, kuzvidzora lubrication, kupisa kupisa, magetsi kudhiraivha, kupisa kwekushisa, kupisa ngura uye zvimwe zvinhu.
Pashure: Graphite hita
Zvadaro: Yakachena kuchena graphite chubhu